देउवा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित, शतप्रतिशत मत भने पाएनन् ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
देउवा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित, शतप्रतिशत मत भने पाएनन् !
प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। गृहजिल्ला डडेल्धुरामा भएको सातौं जिल्ला अधिवेशनबाट उनी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका हुन्।
दलित महिला समावेशी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा हरिनादेवी कामी र दलित पुरुष समावेसी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सन्तोष जैरु सर्वसम्मत भएका छन्।
समावेशी जनजाति महाधिवेशन प्रतिनिधिमा बलबहादुर गुरुङ र समावेशी अपांगता अल्पसंख्यकतर्फ जयप्रकाश भट्ट सर्वसम्मत चयन भएकाे केन्द्रीय निर्वाचन प्रतिनिधि तथा निर्वाचन अधिकृत बमले जानकारी दिए।